July 10, 2021 - Celegroup
[ July 26, 2021 ] “ ခဏတာနဲ့ တစ်ဘဝစာ “	Knowledge
[ July 26, 2021 ] တစ်ခွန်းထဲသော ဆုံးမစကား….	Knowledge
[ July 26, 2021 ] မွတ္ပုံတင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့လၽွင္ ေငြတျပားတစ္က်ပ္မွ မကုန္ဘဲ အခုနည္းအတိုင္း ျပန္ေလၽွာက္လိုက္ပါ	Knowledge
[ July 26, 2021 ] အနမ္းေပးျခင္းကေနရရွိမယ့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား	Knowledge
[ July 26, 2021 ] နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်​း အခုမှသိ​တယ် (ရှယ်ယူထားလိုက်ပါတော့)	Knowledge
အရိုးပြုတ်ရည်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျားနာခြင်းမှ လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင်
July 10, 2021 cele group 0
အရိုးပြုတ်ရည်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျားနာခြင်းမှ လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင် ခုခံအားမြင့်တင်ဖို့အတွက် တန်ဖိုးအနည်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးအစားအစာကို ပြောပါဆိုလျှင် အရိုးပြုတ်ကို ပြောရပါမည်။ အသားမဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ကြက်ရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ဝက်ရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ အမဲရိုးဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရိုးတွေနဲ့ အရိုးပြုတ်တစ်ခွက်ချက်လို့ရပါတယ်။အရိုးပြုတ်ရည်တွေမှာ သတ္ထုဓာတ် နှင့် ဗိုက်တာမင်တွေအပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အရိုးပြုတ်ရည်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေက လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် အူနံရံပြုပြင်ကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခုခံအားစနစ်ရဲ့ ရာနှုန်းတော်တော်များများကို အူလမ်းကြောင်းရဲ့GALT လို့ခေါ်တဲ့ gut associated lymphoid tissue က […]
သင့်မျက်လုံး အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
သင့်မျက်လုံး အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ တီဗီ၊ကွန်ပျူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်းများ အသုံးများခြင်းဟာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်စိကိုထိခိုက်လာတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မျက်ရည်ပူကျခြင်း၊မျက်စိယားခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရပြီလာ:?ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကို ခေတ္တရပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်စိကြွက်သားများ အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်ပေးရမယ်နော်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁)-အမှောင်ထဲကိုငေးကြည့်ပါ။ -စားပွဲတစ်ခုပေါ်မှာ တံတောင်ဆစ်များကို ထောက်ပါ။ -သင့်မျက်စိ၂ဖက်ကို လက်ဖဝ ါး ဖြင့်အုပ်ပါ။ -စိတ်ကိုလျှော့ချပြီး အမှောင်ထုကိုခံစားပါ။ -မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ထိုအတိုင်းနေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၂)- မျက်စိကိုဘယ်ညာကစားခြင်း -မတ်တပ်ရပ်ပါ သို့မဟုတ် […]
“အေမ့အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္တစ္အိုးေတာ့ ရေအာင္လုပ္ေပးပါ “ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ လူၾကားထဲ မ်က္ရည္က်မိတယ္
“အမေ့အတွက် အောက်ဆီဂျင်တစ်အိုးတော့ ရအောင်လုပ်ပေးပါ “ကျွန်တော် ဒီနေ့ လူကြားထဲ မျက်ရည်ကျမိတယ် ။ ကျွန်တော် ယနေ့ ကားပေါ်မှာ ငိုမိခဲ့တယ် ။ အလကားရတဲ့ “ လေ ” လို့ ပြောတဲ့သူကို အခုနေ အောက်စီဂျင် တအိုးသယ်ပြီး လိုက်ရှာ ကြည့်စမ်းပါဗျာလို့သာ ပြောချင်မိပါတယ် ။မလွယ်ကူခဲ့ပါဖူး ၊ လုံးဝကို မလွယ်ကူနေခဲ့ပါဖူး ။ “အမေ့အတွက် တအိုးတော့ ရအောင်လုပ်ပေးပါ ”ဆိုကာ ကျွန်တော့ရှေ့တင် […]
မလိုအပ်ဘဲ အောက်စီဂျင်တွေမကုန်ရအောင် အောက်စီဂျင်ကို ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာ အလွယ်နည်း
မလိုအပ်ဘဲ အောက်စီဂျင်တွေမကုန်ရအောင် အောက်စီဂျင်ကို ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာ အလွယ်နည်း အောက်စီဂျင်ကို ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာ အလွယ်နည်း တွက်ဖို့ကPulse Oximeter မှာပေါ်တဲ့ဂဏာန်းကို 94 ထဲကနှုတ် ပြီးရင်4နဲ့စား၊ ရလာတဲ့ ရလဒ်အတိုင်း ဒိုင်ခွက်မှာချိန်ပေး.. (အကြွင်း0ဆိုရင်)ရလာတဲ့ရလဒ်ကို 1ထည့်ပေါင်းပြီး ဒိုင်ခွက်မှာချိန်ပေး (အကြွင်းရှိခဲ့ရင်) ဥပမာတွက်ပြမယ်.. Pulse Oximeter မှာ 84 ဖြစ်နေရင် 94-84=10 10 ကို 4နဲ့စားရင် ရလဒ်က2[…]
“ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ”
ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့… သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ အောက်ကျပေးရတာကို မရှက်ပါနဲ့ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ့်မာနကြောင့် လက်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာကို ရှက်ပါ အထီးကျန်ရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ စိတ်ဓာတ်ချင်းမတူ စရိုက်ချင်း မဆီလျော်တဲ့ သူနဲ့တဘဝလုံး ဝဋ်ခံရမှာကို ကြောက်ပါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ ဆုံးရှုံးရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်သော သူတွေနဲ့ တမိုးတည်း နေရမှာကို ကြောက်ပါ ပကာသနဆိုတဲ့ […]
အမေတွေကပြောလေ့ရှိကြတယ် နို့ကအသားအရေအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့လေ။ ဟိုးးး ရှေးခေတ်တွေတုန်းကဆို နို့စိမ်ပြီးတောင်ရေချိုးကြသေးတာ။ ဂန္တဝင်အလှဘုရင်မကြီးကလီယိုပတ်ထရာလိုလေ။ အခုခေတ်မှာတော့ အဲဒီအလေ့အထတွေ ခဏခေါက်ထားလိုက်ကြရအောင်နော်။ သောက်လို့ရော ရေချိုးလို့ရော ခေါင်းလျှော်လို့ပါရတဲ့ ခေတ်သစ်ရဲ့အလှကုန်ကတော့ ဘီယာပါတဲ့။ မုယောစပါး၊ နှံစားပြောင်း၊ စပါးတွေကနေချက်လုပ်ထားတဲ့ဘီယာထဲမှာ အသားအရေကိုအားဖြစ်စေတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါဝင်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? ၇ရက်ဆက်တိုက် ဘီယာနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်… Day 1. ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ဘီယာကို မတ်ခွက်ထဲထည့်ပါ။ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးသားမျက်နှာကို ဘီယာနဲ့ထပ်ဆေးပါ။ အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် လက်ဖျားထိပ်နဲ့ ဖိဖိပေးပါ။ နူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် အသာအယာတို့ပြီးသုတ်ပါ။ ညဘက်သစ်ရင် […]
ဖုန်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက အန္တာရာယ်အကင်းဆုံးပဲ
“ဖုန်း အသုံးပြု သတိပြုရန်နဲ့ ကာကွယ်နိုင်သောနည်းများ” ” အင်တာနက်သုံးခြင်းအတွက် အမြင်အာရုံကောင်းစေရန် ” မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုရာတွင် ဘယ်ဖက်နားကို အသုံးပြုပါ ။ ညာဖက်နားနဲ့ နားထောင်လျှင် မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ထွက်ရှိသော ရေဒီယိုလိူင်း( Mobile radiation ) ဦးနှောက်ကို ပို၍ ပျက်စီးစေကြောင်း သိရသည်။ များသောအားဖြင့် ညာသန်သူများအတွက် ညာဖက်ကို ပိုမို အသုံးပြုသည့် ကို ဆင်ခြင်ပါ ။ ည မှာ […]
ဒီ (၆)ချက်ကတော့ သင့်ကိုချစ်သူမရစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းပဲ…..
တစ်ခါ တစ်လေ ဘဝကြီးကနေ ရတာ အရမ်းကို အထီး ကျန်ငြီးငွေ့ စရာကောင်း လွန်းလို့ ချစ်သူလေးတစ်ယောက်လောက်တော့ ထားချင်ပေမယ့် သင့်ကို လာကြိုက် တဲ့ကောင်လေးတွေ မရှိလို့ အခက်တွေ့နေပြီလား။ ကောင်လေးတွေ သင့်ကို ဘာကြောင့် ဖွင့်မပြောကြ တာလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာရဲ့အရင်း အမြစ်ကို ဒီအချက် (၆) ချက်ကနေ ရှာဖွေကြည့်ရအောင်။ သင် အခုချိန်အထိ ရည်းစားမရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၆) ခု (၁) မပြင်မဆင်နေလို့ […]
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ မိသားစုဝင် အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ ချစ်သူရည်းစားအချင်းချင်းဖြစ်စေ တစ်ခါတလေမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ မလိုအပ်ဘဲ အငြင်းအခုန် မလုပ်ပါနဲ့ လူတိုင်းဟာ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံချင်း မတူညီကြတာမို့ သူ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်၊ သူ့ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက် အားလုံးဟာ ထပ်တူမကျနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားက မတူညီမှုတွေကို နားလည်ပေးတတ်ရပါမယ်။ ဘာမှ အရေးကြီးတဲ့ […]
သင့်ဘဝအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြည့်တင်းပေးမယ့် စကား (၂၃)ခွန်း
သင့်ဘဝအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြည့်တင်းပေးမယ့် စကား (၂၃)ခွန်း (၁)မျှော်လင့်ချက်သာရှိပါစေဘဝဆိုတာရှင်သန်လို့ အကောင်းဆုံးအရာတွေပါပဲ (၂)သူပြုံးမှ ကိုယ်ပြုံးမဲ့အစား ကိုယ်ကစပြီး ပြုံးလိုက်ပါ (၃)လြယ္တယ္ဆိုၿပီး မေပါ့ပါနဲ႕။ဘဝရဲ့သီအိုရီမှာ အသေးအဖွဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ (၄)ယုံကြည်မှုရှိမှ အရာရာတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ စွမ်းအားနဲ့ သတ္တိရှိမှာပါ ။ (၅)မစဉ်းစားပဲ လုပ်လိုက်တာ မှန်သွားရင်တောင်အကြိမ်တစ်ရာမှာ တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်မှာပါ ။ (၆)ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတစ်စက်ရှိတာဟာလုံးဝမရှိတာထက်စာရင် တော်ပါသေးတယ် ။ (၇)ကံတရားပါကွာလို့ ပြောနေသရွေ့ဉာဏ်သမားဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ။ (၈)စေတနာသည် ကံတရား၏ အရင်းအမြစ် […]
“ ခဏတာနဲ့ တစ်ဘဝစာ “
မွတ္ပုံတင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့လၽွင္ ေငြတျပားတစ္က်ပ္မွ မကုန္ဘဲ အခုနည္းအတိုင္း ျပန္ေလၽွာက္လိုက္ပါ
အနမ္းေပးျခင္းကေနရရွိမယ့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်​း အခုမှသိ​တယ် (ရှယ်ယူထားလိုက်ပါတော့)